Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Madaxweynaha Soomalia oo kusii jeeda Addis ababa
Madaxweynaha Soomalia oo kusii jeeda Addis ababa
Jan 26, 2013 ENTERTAINMENT 0
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sii jeeda magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya halkaasi oo uu dhowaan ka furmayo shirkii madaxda Midowga Afrika.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa safarkaan wuxuu u noqonayaa kii labaad uu ku tago wadanka Itoobiya tan iyo markii sanadkii hore lagu soo doortay magaalada Muqdisho.
Xasan Sheekh ayaa la filayaa inuu khudbad uu uga hadlayo xaalada Soomaaliya uu ka jeediyo shir madaxeedka, xili dowlada Soomaaliya dhowaan si rasmi ah u aqoonsatay Soomaaliya.
Magaalada Addis Ababa ayaa waxaa haatan ku sugan Raysal Wasaare kuxigeenka ahna wasiirka arrimaha dibada Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan, iyadoo ka qeyb geli doonta shirka wasiirada arrimaha dibada oo loogu gogol xaari doono shirka madaxweynayaasha ay yeelanayaan.
Shir madaxeedka Midowga Afrika ayaa sanadkan looga hadli doonaa arrimo badan, sida Mali, qalaalasaha ka taagan Afrikada dhexe, Labada Sudan iyo Soomaaliya.
Soomaaliya ayaa waxaa ka dhacay isbadal badan ka dib markii dowlada Soomaaliya ay xooga saartay wax ka qabashada amaanka iyo walinba soocelinta iskaashiga caalamig ah.
Daawo Khataraha Dunida iyo Nasiibka Dadka Qaar Wasiirka Khaarajiga oo ka hadashay shirka London ka dhici doona sheegtayna inaanay jirin dhawr dawladood oo Soomaliya ka jiraa